Izinto ezibalulekile ongazibeka kucebo lakho lokuhweba | I-FXCC Blog
Aug 9 • Ukuthengiswa Kwama-Forex Izihloko, Amazwana eMakethe • Ukubuka kwe-1230 • Amazwana Off kokunye okubalulekile ukubeka ezinhlelweni zakho zokuhweba
Lapho ungumthengisi we-novice uzohlala ukhunjuzwa futhi ugqugquzelwa abaqeqeshi bakho nabahwebi abakanye naye ukudala uhlelo lokuhweba. Awukho umbhalo obhaliwe owuhlelwayo wepulani, noma kunesethi yemithetho ebhekwa kakhulu abathengisi abaningi abangavuma ukuthi ibalulekile ekugxilisweni.
Uhlelo lokuhweba kufanele luchazwe kabanzi futhi luqonde kangangokuba luhlanganisa zonke izici zokuhweba kwakho. Uhlelo kufanele lube iphephabhuku lakho 'lokuya' okufanele lihlale linezelelwa futhi lihlaziywa. Kungaba lula futhi kube yiqiniso, noma kungaqukatha idayari ephelele yakho yonke imisebenzi yakho yokuhweba, phansi kuthengiso ngalunye oluthathayo kanye nemizwelo ohlangabezana nayo ngesikhathi sakho sokuhweba sokuqala. Ngaphambi kokuthi ucabangele ukuhweba lapha iziphakamiso ezimbalwa zokuthi yini okufanele ibe sehlelweni lwakho.
Zibekele imigomo yakho
Beka izizathu zethu zokuhweba; kungani uhweba? Ngabe ufisa ukuzuza ini, ufuna ukukufeza ngokushesha okungakanani? Zibekele ithagethi ukuze ube nekhono ngaphambi kokusetha ithagethi ukuze uzuze inzuzo. Kufanele wazijwayeze izici eziningi zaleli bhizinisi eliyinkimbinkimbi ngaphambi kokuqala ukuqondisa ukukhula kwe-akhawunti.
Sungula ukubekezelela ingozi yakho yokulahleka komuntu ngamunye nokuqedwa kwe-akhawunti
Ukubekezelela ubungozi kungaba yinkinga yomuntu siqu, ingozi eyamukelekayo yomthengisi ingaba yinkinga yomunye. Abanye abathengisi bazobe bezilungele ukufaka engcupheni i-0.1% kuphela ngosayizi we-akhawunti ngayinye, abanye bazohamba bakhululeke ngokuphelele nge-1 ukuya engcupheni ye-2% ngokuhweba ngakunye. Unganquma ukuthi iyiphi ingozi oyilungele ukubekezelela ngemuva kokuhlanganyela emakethe. Abaeluleki abaningi babhekisela ekuhlolweni kwesandla se-sweaty; kuliphi izinga lobungozi ongakutholi ukukhuphuka kwesilinganiso senhliziyo noma ukukhathazeka lapho ufaka futhi ubheka ukuhweba?
Bala ingozi yakho yokungakwazi ukuhweba
Ngenkathi ungayikhokhela i-akhawunti yakho yokuqala ngenani eliyisiqalo, kuzoba nezinga lokulahleka, ngenxa yezidingo zokuphakama kanye ne-margin lapho ungakwazi ukuhweba ngenxa yemikhawulo yomthengisi wakho kanye nemakethe. Kufanele futhi ubhekise uxhaso lwakho lwe-akhawunti yakho yokuqala kuzinga lakho lokonga. Isibonelo, ingabe uzibeka engcupheni ye-10% yemali oyilondolozile ukuzama ukufunda ukuhweba i-forex?
Rekhoda futhi uhlaziye yonke imiphumela esekwe emuva yamasu owasebenzisile
Uzozama izinkomba eziningi zobuchwepheshe ngazinye, futhi uzozama izigcawu eziningi zezinkomba. Okunye ukuhlolwa kuzophumelela kakhulu kunokwabanye. Ukuqopha imiphumela kuzokusiza uthole ukuthi yisiphi isitayela somthengisi okufanele ube yiso. Uzobuye futhi, ngenqubo yokuqedwa, unqume ukuthi yimaphi amasu asebenza kakhulu kuzitayela ezahlukahlukene zokuhweba ongathanda.
Dala uhlu lwakho lokubheka lokuhweba bese uqala ukunquma ukuthi kungani wenze lezi zinqumo
Udinga ukunquma ukuthi yikuphi ukuphepha okuzohwebelana ngakho ngaphambi kokuzibophezela ekuthengiseni bukhoma. Ungalungisa lolu hlu lokubuka ngosuku oluzayo, ungangeza noma ulisuse kuwo kuye ngokuthi isu lakho lisebenza kanjani phakathi kokuhweba okubukhoma ngemuva kwesikhathi sokuhlolwa. Kufanele usungule uma ukhetha ukuhweba ngababili kuphela, noma mhlawumbe ungahlakulela isu lokubonisa ukuthi uma amasignali e-chime futhi avumelanisa kunoma yikuphi ukuphepha okuluhlu lwakho lokubuka uzothatha ukuhweba.
Bhala uhlu lwezithako zohlelo lwakho lokuhweba olunenzuzo
Kubalulekile ukuthi wephule isu lakho lonke kuzo zonke izingxenye zalo; ukuphepha ozohweba ngakho, ubungozi ngokuhweba ngakunye, ukungena kwakho nokuphuma kwemingcele, ukulahleka ngosuku okwephula umjikelezo wesifunda kanye nokudonsa okulungele ukukubekezelela ngaphambi kokucabanga ukuguqula indlela yakho namasu akho njll.
« Izinto ezibalulekile ongazibeka kucebo lakho lokuhweba Ukwamukela ongakwazi ukukulawula lapho uhweba i-FX kubalulekile entuthukweni yakho »